Pragya Khanal | Nepali Stories
Pragya Khanal – Kali Nayika
प्रज्ञा खनाल – काली नायिका
पशुपतिनाथको मन्दिर तल दक्षिणतिर निकैबेरदेखि एउटी नारी ठिङ्ग उभिएकी छ । निकैबेरदेखि उसका गोडा गलेका छैनन् । भर्खर कालिमाटीको खाडलबाट निकालिएको मूर्तिझैँ उसका शरीरउपर कालै वस्तुले अशोभा बढाइरहेको छ । हुन त उसका सौन्दर्यले कतै कुनै स्थानविशेष शोभा बढाउने स्तरका छैनन् । दुईखुट्टे मान्छे हुनुभन्दा अर्को सौन्दर्य उसमा छैन । निराशारूपी अन्धकारमा डुब्नडुब्न खोजेका आँखामा एउटा अभिशप्त प्रश्नवाचक चिहृन मडारिएझैँ लाग्दथ्यो ।
ऊ उभिएको नजिक एउटा फराकिलो, चिल्लो, चिप्लो ढुङ्गा फैलिएर रहेको छ । उसका कोप्चा खोरीजस्ता आँखा बरोबर त्यसैमा पुगेर अड्किरहन्छन्, किन हो । त्यहाँ त्यो जर्जर पाषाण त्यसै पसारिइरहेको थियो । त्यहाँ न कुनै कुशल शिल्पीद्वारा कमलपुष्प कुँदिएको थियो न कुनै चित्रकारको मन-कल्पनाले सारा संसारको चित्र चित्रित गर्न सकेको थियो । लाख प्रयत्नपूर्वक हेर्दा पनि त्यहाँ जीवनका रेखाहरू देखिँदैनथे, देखिन्थ्यो मात्र बागमतीका कलुषित जलबिन्दुका छिटाछाटीहरू । पवित्र बागमतीका दुर्गन्धित, धमिला, मैला छिटाहरू कुनैबेला उसका मुहारैभरि आएर उछिट्टन्िथे, ऊ भने चुपचाप थिई । तैपनि उसका मुहारभरि उहिल्यै कहिले इष्ट वस्तु वियोगबाट सहेको असहृय अन्तर्दाहका डामहरू गाढा देखिन्थे ।
साउन महिना, राताराता वस्त्र पहिरेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने नारीहरूको घुइँचो छिचोलिनसक्नु छ । ईश्वरभक्तिको उत्कट चाहनाले कैले, कुन र कस्तो सुखद प्राप्तिमा शोभा पाउला Û हिजोसम्म झरीले आँखा उघारेको थिएन, आज भुसुनेपानी मात्र बिर्बिराइरहेको छ । वातावरणमा मनसुनी चिस्याइलो बोकेको सिरसिरे बतासले मादकता विकसित गरेको छ । साउन महिना सम्पूर्ण धर्ती पन्नैपन्नाको तन्ना ओछ्याएर राधाकृष्णलाई झुलामा झुल्दै प्रेममा विलय भएको देख्न आतुर रहन्छ । सांसारिक जीवन पनि प्रकृत प्रेरणाले वा ईश्वरीय प्रेरणाले मायाप्रेम, स्नेह, फैलाउन र हुर्काउने इच्छा राख्दछ ।
त्यहाँ उभिएकी रूपको भागै नपुगेकी त्यो कुरूपाका मुहारमा भावरेखाहरूका उतारचढाव स्पष्टै देखिन्छ । कुनै भारी वेदनाले उसका अन्तष्करण व्याकुल पारिएझैँ देखिन्छ । भस्मेश्वरघाटको छेवैमा उभिएकी त्यो काली नायिका आफ्ना विगतका धन-ऋणमा तल्लिन हुन्छे, केहीबेर । उसका ऊ आफूभन्दा कालाकाला आँखाहरू बागमती वरिपरि गर्दै चलमलाएका देखिन्छन्, नत्र उसका खोपिल्टे आँखाहरू कृष्णपक्षको चन्द्रझैँ क्षिण हुँदै गएझैँ देखिन्थे र ऊ आँखाका ढकनी उचाल्न बल गरेझैँ गरेर हेर्दथी । बखतबखतमा स्याईंस्याईं गर्दै ख्वाङख्वाङ खोक्दै लामोलामो सास फेर्दै सुस्केरा हाल्थी ‘खुइय खुइय’ । ढङ्ग नभएका मान्छेले पकाउँदा ताओमै डामि्रएको गहुँको रोटी जस्तो शरीरमा श्वासप्रश्वासको आरोहअवरोहहरू स्पष्टै देखिन्थ्यो । उसको धैर्य शिथिल भएझैँ निश्वास छोड्थी ।
बसेको खबटे कञ्चट, गालाका खोबिल्टा अत्यन्त घीनलाग्दा सोमबारे महिलाले उसलाई हेरेर दिक्क लाग्दो मुख लगाए
छि : यस्ता स्त्रीसँग यिनका पुरुषहरू कुन मोहनीमा मोहित हुँदा हुन्, अथवा यिनका पुरुष छैनन् वा भए पनि के गर्दा
हुन् आफ्नो शरीरलाई ती सोमबारे महिलाले निहुरेर छड्के, कर्के, अगाडि-पछाडि हेरेर पूर्णतृप्तिको भाव मुहारभरि चढाएर हिँडिन । सायद काली नायिकाको मिलेको कुरूपतामाथि व्यङ्ग्य गर्दै
हुन पनि त्यहाँ कल्पना गर्न सकिने ठाउँ नै थिएन । उसका खोबिल्टे गालामा पुक्कपुक्क मासु थिए । उसको डामि्रएको शरीरभरि कतै पोटिलो गोल मिलेका कमला मसल हाडलाई छोप्दै सुन्दर आकारमा विकास भएका पनि थिए । कसले सोचाइ विस्तार गरेर भन्न सक्छ र ऊ पनि कुनै बखत हिरोइन पो थिई कि झलझली परेको कालो हीरा अहिले पो उसको शरीरबाट चटक्क छाडेर अन्तै बास बस्न गएझैँ छ, यौवन ।
उसको नजिकै आएर एउटी लुत्याई बाँदर्नी अताल्ली अताल्ली आफ्ना शरीर कन्याउँदै थिई । छालाछाला मात्र बाँकी रहेझैँ त्यस बाँदर्नीको शरीर रगतपच्छे भएको छ- ऊ आत्तिँदै एता र उता गर्दै खर्‍याङ्खर्‍याङ् कन्याउँदै गर्छे । नायिकाले मुन्टो फर्काइ, दीन नजर पुर्‍याउँदै केहीबेर बाँदर्नीलाई हेरिरही । उसले आँखा चिम्म गरी र बाँदर्नीलाई भुसुक्क बिर्सी । सायद यसबखत ऊ उसका घरका मीठा स्मृतिमा हराउन चाहेकी होस्, जहाँ काठका घुमाउरे भर्‍याङ ढङढङ गरेर घरै थर्काएर तलमाथि, चोटाकोठा, दलान, मटान, चहार्दै बाल उदण्डताका दिन सल्बलाएका हुन् । अथवा उही जानोस्, बम्बैका दुर्दिनहरू भक्कानिएका हुन् । न कोक्किएका हुन् बैँसको वैशाख, काफल, चुत्रो र जमुनिमान्द्रोका अमिला, पहेँलापहेँला फूलहरू, हुनसक्छ पीपलका पात नाचेझैँ आलीआली र वनवनको नाच र प्रशंसक नजरका छड्के इसारा !
काली नायिकाका आमाबाबुको ऊ सानै हुँदा मृत्यु भयो । त्यसपछि ऊ दाजुभाउजूको कडा बुहार्तनमा हुर्किन थाली । जे गरे पनि जहिले पनि उसको मात्र अर्घेलो देखिन्थ्यो । क्रमशः घरको टोकसो बढ्दै जान थाल्यो । उमेर चढ्दै जाँदा टोकसोका विषयवस्तु फरक हुनथाले । टुहुरीका दिनदशा बिगि्रँदै गए ।
भाउजू चोथाले असाध्यै करकर गर्थी-कैले स्कुल ढिला गएको, कैले स्कुलबाट ढिलो आएको, भातमा अरुची बढेको, नौरङ्गी लुगा गहना जडेर बिदाका दिन आफ्ना प्रशंसकहरूलाई नजर गराउन हिँडेको- यस्ता कुराहरूका विषयवस्तुहरू भाउजूद्वारा दाजुमा प्रसारण भई नै रहेथ्यो । त्यस्ता प्रस्तुति दाजु कुनै प्रकाण्ड विद्वान्ले दिएको अर्तिउपदेशझँै ध्यानमग्न सुनिरहन्थ्यो र आज्ञाकारी शिष्यझैँ अक्षर नबिराई पाठ घोकेर कण्ठाग्र पार्दै उसका उपर बर्सिन्थे लबटैलबटा ।
अब घरको टोकसो खप्दाखप्दा मनले बहिर्गमनको सुखमय बाटो खोज्न थाल्यो । साँच्चै बाहिरको संसार कताकता उज्यालो र रमाइलो लाग्दैलाग्दै जान थाल्यो स्वतन्त्र सास फेर्न पाइने शान्तविश्राम ।
उमेर जतिजति बढ्दै गयो प्रशंसकहरू बेहिसाबसित हृवात्तै बढ्दै जानथाले । घर सारा निकाशा रोक्ने, विकासका सम्भावनाहरू बन्द गर्ने बोझिलो बाध्यता बन्दै जाँदा ऊ निगमनका बाटाहरू पहिल्याउन खोज्दै थिई ।
उसका विभिन्न क्रियाकलाप बढ्दै गए । जीवन भनेको सुमधुर सपनाहरूको तानावाना मात्र हैन यहाँ आँसुका दहमा आहाल बस्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा बु्झ्न सकेकी थिइन- ‘आपत्तिजनक क्रियाकलापमा लागेको’ दोष पारेर विद्यालयले निष्काशन गर्‍यो ।
विद्यालयले अभिभावक बोलायो, अरू मान्छे भेला गर्‍यो, पचासौँ जनाको अगाडि ठिङ्ग उभ्याएर उसमाथि विभिन्न लाञ्छना लगायो । थोरै भीडमा पनि केही सर्सराहट उठ्यो र परर्र पड्क्यो ताली । समाजलाई उज्यालोतर्फ लानेहरूले पनि मुख चपचपी मिठ्याए-गर्विलो पुरुषार्थको आभा झल्किन्थ्यो मुहारमा । तालीको मोहनी नै छुट्टै छ, ताली पाए गाली पनि तालीका गडगडाहटमा बिलाउँदो हो । त्यत्रा भद्रजनले न जीवन देख्यो न भविष्य सम्झ्यो, न आफ्ना पनि सन्तान छन् भन्ने विचार गर्‍यो । एउटा हराभरा हुनसक्ने जीवनको सम्भावित राजीनामामा हस्तखत गराइयो ।
‘स्याबास Û’ भन्यो जगतैले, विजयको मुजुरकल्की ढल्कियो समाजका शिरमा । ताली बजाउनेबाहेक अरू संसारै दुष्ट र नालयकीमा दरिने विश्वासले कसैले ताली नबजाउने आँट गरेन । डुङडुङी गन्हाइरहेका चरित्रका दुर्गन्धलाई ढाकछोप गर्न भारी पुरुषार्थ प्रयोग भयो । खाली त्यो टुहुरी एउटी विकम्मा, अरू सारा देउता भए ।
परिवारले धारेहात पुर्पुरोमा धार्‍यो, दुनियाँले गरेको तेजोवधका कारण उसभित्रका ज्ञानशक्ति यस्तो दुर्वल भएर गयो उसले केही गर्ने आँटै गर्न सकिन । उसका पानीदार टलक्क टल्केका आँखाले तरक्क आँसु काढे, उसको अन्तरआत्मादेखि उर्लियो एउटा भद्दा सराप । त्यस्तै डरलाग्दो भद्दा सराप गरेर ऊ त्यहाँबाट बिदा भई ।
काली नायिकाका जीवनजराले गडिन पाएन । रूख बनेर हाँगाबिँगा फैलाउन पाएनन्, मुजुरामा मञ्जरी लाग्न पाएनन्, खुला हावामा निर्धक्क झुल्न पाएनन् । ऊ त अब जिल्लाराम परी । घरले त्याग गर्‍यो । पीपलपाते फिफिर्रे मुटुहरू फिफिर्राउन थामिए । ऊ झस्की ‘खै त्यत्राविधि मान्छेहरू ?’ जो सदा उसका पाउको धूलो हुन तत्परता देखाउँथे, अब दुनियाँले चोरऔँला ठड्यायो ऊतिर ।
छड्के सिउँदो, कर्के नजर, लर्के जोवन विकम्मा भो यतिखेर । बरु चोर बाटाहरू पो खुल्न थाले । धमाधम । नुहेका हरेक वस्तुले उसकै पाउँ परेझैँ लाग्ने सारा भ्रम टुटे । जन्म सुधार्ने अर्ति-उपदेश जपाएर बुजु्रक बनाउन पनि नखोजेका हैनन्, दुनियाँले जप्न लगाएको जपमाला उसले ग्रहण गरिन ।
अहिले पो उसले लामो सास फेर्न पायो । सजाय तोक्नेहरूले समाजसुधारको ठूलो काम गरेर पगरी भिर्न पायो ।
एउटी अल्लारे टुहुरीलाई मान्छेको दर्जाबाट खुर्मुर्‍याउन सकेको विजयोत्सव खुसी भएर मनायो होला समाजले । आजै पनि सम्झेर ल्याउँदा उसलाई ऊ आफैँ कुनै नाटकको पात्र भएझैँ लाग्छ, जसको हिँड्दाहिँड्दै हिँडेको बाटै बिलाएर जान्छ । विद्यालयबाट निकालिँदा उसको तोकेर ठम्याउन वा औँल्याउन सकिने कुनै गल्ती थिएन । बुद्धि पुगेन, एक-दुई दिन प्रशंसकहरूका साथ लागेर घुम्न गएकी त हो नि
यस्तै साउनमास थियो, रुझ्दै विद्यालय पुगेकी थिई, पुग्नेबित्तिकै कारबाहीमा परेर ऊ फिर्ता भई । झमझम वषर्ा ओढो नहुँदा निथु्रक्क भिजेका लुगा, मनसुनी चिस्याइलो बोकेको बतास के-के न गरौँला भन्ने आँट, पीपलपाते मुटुमा विश्वास, बैँसका तोपले जगमगाएका भुइँमै नटेकिने पैतालामुनिको संसार भास्सिएर पात्ताल पुग्यो । चारैतिर जगमगाएको दरिलो विश्वास त कुहिरोको काग जस्तो पो रहेछ । त्यस्ता विश्वासको बदला उसलाई उपहार पशुभन्दा पनि तल्लो जीवन
परदेशको साँघुरो कोठामा सोह्रसिङ्गार रचेर हरेक दिन भुसतिघ्रे धुर्मुस स्याहारेरै बितेछन् जीवनका दुईबीस वर्ष ।
ऊसामु सधैँ एउटा ठाडो प्रश्नले प्रश्न गर्छ- किन घर, विद्यालय, आफन्तले त्याग गरेर विरानु दुनियाँसामु पस्केर छोडिदियो ?
काली नायिका सुस्केरा हालेर फतफताउँछे -‘उफ मलाई जीवन त्यहीँदेखि दोहोर्‍याउन मन छ ईश्वर जहाँ म गिलो माटोको अविकसित भाँडोजस्तै थिएँ । मेरो निर्धारित आकार निर्धारण नहुँदै कडा धुपमा सुकाएर कडा पारिदिए । मलाई जीवन दोहोर्‍याउन देऊ ।’
उसले भस्मेश्वरदेखि आर्यघाटसम्मका चिता हेरी, कुनै चिता खाली छैनन् । चिताबाट उठेका धुवाँको मुस्लो पशुपतिनाथको गजुरलाई फनक्क घुमेर मास्तिर मास्तिर अकासियो । उसका पानी सुकेका सुख्खा आँखाहरू मैलो बागमतीमा गएर गाडिए । उसले निहुरेर आफ्नो शरीर हेरेर फतफताई- ‘माता तिम्रो र मेरो व्यथा उस्तै छ, मेरो रङ्गमञ्चमा पनि यस्तैयस्तै फोहोर पीडाका, वेदनाका र सहनशीलताका दृश्यले भरिभराउ छ, तिम्रो अनि मेरो जीवनलाई रछ्यानै रछ्यान पारेर छाड्ने हामी हौँ त ?’
उसले ठूलै आवाजले कराई-
‘माता हाम्रा जीवनका सिर्जनाका बाटाभरि विष काँढाको काँढेदार थाँग्रो गाडेर यो निर्दयी दुनियाँले विषाक्त बनाइदियो, सो विष अहिले कयौँका जिन्दगीमा घोलेर जिन्दगी नै विषाक्त भइसक्यो र अझ कति कति जिन्दगीका रगतरगतमा विष घोलिन बाँकी छ । उसले दुवै हातले टाउको समातेर पछाडि ढल्काई ।
उसका आँखाहरू आकाशतिर फर्किए, जहाँ नीलो आकाश छेकेर घुर्मैलो बादल डम्म विराजमान थियो । उसका सुख्खा आँखाभरि अनन्त करुणाका लहरहरू छालझैँ उठ्थे, छचल्किन्थे र उछालिँदै थचारिँदै गर्थे ।
बागमतीका मैला, काला, दुर्गन्धित फोहोरी छिटाहरू ऊ उभिएको ठाउँसम्म छट्याकछुटुक् पर्दै सुक्दै, पर्दै सुक्दै गथ्र्यो ।
Posted in Pragya Khanal
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Pragya Khanal Literatures of Nepali Story Writer Pragya Khanal Nepali Author Pragya Khanal Nepali Katha Nepali Katha Kali Nayika by Pragya Khanal Nepali Kathakar Nepali Kathakar Pragya Khanal Nepali Rachanakar Kathakar Pragya Khanal Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Pragya Khanal Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Pragya Khanal Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Kali Nayika by Pragya Khanal Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Pragya Khanal Pragya Khanal - Kali Nayika Pragya Khanal's Nepali Story Kali Nayika Sahityakar Pragya Khanal Ka Nepali Katha Haru